विश्वमा २४ घण्टामा थपिए दुई लाख ९२ हजार नयाँ कोरोना संक्रमित
कुन देशमा कतिको मृत्यु ?
प्रकासित मिति : २०७७ श्रावण १७, शनिबार ०८:१८ प्रकासित समय : ०८:१८
एजेन्सी, पछिल्लो २४ घण्टामै विश्वभर दुई लाख ९२ हजारभन्दा धेरै कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शुक्रबार मात्रै विश्वभर २ लाख ९२ हजार ५२७ जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन् । अमेरिका, ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिकामा धेरै सङ्क्रमित थपिएका संगठनले जनाएको छ । ६ हजार ८१२ जनाको भने ज्यान गएको छ ।
यसअघि गएको ९ गते २ लाख ८४ हजार भन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित थपिएका थिए । हिजो मात्रै ब्राजिलमा सबैभन्दा धेरै ६९ हजार ७४, अमेरिकामा ६५ हजार ४०६, भारतमा ५५ हजार ७८, दक्षिण अफ्रिकामा ११ हजार ४६ र कोलम्बियामा हजार ६७० जना थपिएका डब्लूएचओले जनाएको छ ।
वल्र्डओमिटरका अनुसार विश्वभर अहिलेसम्म एक करोड ७७ लाख कोरोनाका सङ्क्रमित छन् भने ६ लाख ८२ हजार जनाको ज्यान गएको छ । एक करोड ११ लाख भने उपचारपछि निको भएका छन् । उपचार गराइरहेका ५९ लाखमध्ये एक प्रतिशत अर्थात साढे ६५ हजारको अवस्था जटिल भए पनि बाँकी ५८ लाखको अवस्था सामान्य छ ।
२४ घण्टामा कुन देशमा कतिको मृत्यु भयो ?
साउदी अरेबिया- २४
दक्षिण अफ्रिका -१९३
डेमोसियन रिपब्लिक -१४
नर्थ मेसोडोनिया -६
कोस्टा रिका- १०
एल साल्भाडोर -९
इक्वेटेरियल गुनिया -३२